पी’डा पनि कतिसारो? गा’यव भएका श्रीमान घर मुनि मृ’त भेटिए, स्थानिय नै त्र’सित (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > पी’डा पनि कतिसारो? गा’यव भएका श्रीमान घर मुनि मृ’त भेटिए, स्थानिय नै त्र’सित (भिडियो सहित)
admin November 7, 2019 जीवनशैली, समाज	0
गुल्मी । भनिन्छ नि दुख भन्ने चिज बाजा बजाएर आउदैन हो त्यस्तै भएको छ गुल्मी मालिका गाउपालिकाको यो परिबारमा । आखिर यो दुखी परिवारमा यस्तो घटना कसरी भयो ? सबै गाउले र स्थानियहरु त्रसित छन साथमा दुःखी पनि । जंगलको बिचमा एउटा सानो झुपडी छ, त्यहा बस्दथ्यो २ जना श्रीमान श्रीमतीको परिवार । कस्लाई थाहा थियो एक दिन त्यो परिवारमा यति ठूलो ब ज्रपात पर्छ भनेर । दैवले पनि ठगेको त्यो परिवारमा पर्यो यस्तो ब ज्रपात ।
एक दिन अचानक श्रीमान गायब भए खोज्दै जाँदा आफ्नै घरभन्दा १०० मिटरको दूरीमा ल’डेर खोलामा पुगेको अवस्थामा ला’श भेटियो । त्यो बेला यो परिवारमा यस्तो दुःख आईलाग्यो भएको एउटा आश पनि म’र्यो । त्यति धेरै दुख त तब आयो जब उनै श्रीमानको कि’रिया गर्न खर्च नै पुगेन न त पो’स्टमा’र्टम गर्न नै खर्च पुग्यो । यतिसम्म दुख भोगेको यो परिबारमा परेको ब’ज्रपातले जो कोहिको मन रुन्छ, हेरौ कस्तो अवस्थामा थिए उनको ला’श र उनकी श्रीमतीको यो बि’लौना!
अघोरी बाबालाई म चिन्दिन, त्यसको कुरै नगर्नुहोस भन्दै पत्रकारलाई नै यसो भनेपछि… (भिडियो सहित)
काखकाे बच्चा दिदै भन्छिनः दिदी बाबुको ख्याल गर्नुहोला, म हिँडे, ड्युटी गर्न
सामाजिक सञ्जालमा नायिका शिल्पा किन रोइन? प्रस्नमा केकीले बोलिन् यस्तो!